Wenger “waan diiday dalab iiga yimid Premier League” | Somsoon
Home CAYAARAHA Wenger “waan diiday dalab iiga yimid Premier League”
Wenger “waan diiday dalab iiga yimid Premier League”
Arsene Wenger ayaa sheegay in uu iska diiday dalab uga yimid Premier League sababtoo ah waxaa uu “aad ugu xiranyahay Arsenal. Ninkaan Faransiiska u dhashay oo bishaan 70 jirsaday ayaa ka tagay doorkiisii maareeyenimo ee the Gunners bishii May 2018-kii kadib 22 sano oo uu kooxda maamulayay.
Waa weli in uu go’aansado meesha uu u dhaqaaqayo, laakiin Sky Sports waxaa uu u sheegay in uu dib ugu laaban karo England. “Waxaan ahay nin Arsenal ah kadibna waxaan ahay xirfadyahan. Ma joojin karo shaqadda,” ayuu yiri Winger.
“Waxaan go’aansaday in aanan tagin Premier League sababtoo ah waxaan aad ugu xiranahay Arsenal. Waxaan helay fursado ah in aan ka shaqeeyo England laakiin waan diiday.
“Madoonayo in aan kuu sheego kooxda sababtoo ah dad ayaa daneynaya cadaalad darro ayeyna ku noqon kartaa” ayuu hadalkiisa kusii daray maamulihii hore ee the Gunners.
Winger ayaa Arsenal ku hagay booska ugu sarreeya premier League muddo afar jeer ah.
Markii uu kooxda ka tagayay waxaa uu weli doonayay in uu kooxda gaarsiiyo meel sare, balse sanadihii dambe waxaa uu ku guul darreeystay in uu kooxda gaarsiiyo guulo muhiim ah.
“Waa ay adagtay in maanta la sharaxo caqabadaha aan ku dhisnay garoonka the Emirates sababtoo ah maanta dadka soo gala shan jeer ayey labanlaabmeen” ayuu u sheegay Sky Sports.
Waxaa suurta gal ah in meesha xigta ee uu u dhaqaaqayo Wenger ay noqoto in uu ka tago maamulenimadda islamarkana uu aqbalo in uu ka shaqeeyo FIFA, waxaana uu sheegay in uu go’aan ka gaari doono haddii uu aqbalayo shaqadda mustaqbalka dhow.
Article horeBook: Trump raged against refugees from Somalia in private meeting, CNN
Article socoda Ma dhamaaday mise waqti ayaa u dhiman Baarlamaanka Koofur Galbeed?